दूतावासको भवन निमार्णमा ४० करोड भ्रष्टाचार गर्न लिलामणि फिर्ता बोलाइए !
काठमाडौं – मन्त्रिपरिषद्ले आइतबार साँझ लिलामणि पौड्याललाई फिर्ता बोलाउँदै पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेलाई बेइजिङ पठाउने निर्णय गरेको छ ।
पन्ध्र दिनको भाका राखेर राजदूत पौड्याललाई फर्काउनुको कारणबारे बजारमा विभिन्न हल्ला व्याप्त छन् । प्रधानमन्त्रीसँग मत नमिलेकोदेखि प्रचण्डसँग बदला लिनसम्मका हल्ला भएपनि भित्री र खास कारण अर्कै रहेको परराष्ट्रमा गाइँगुइँ छ ।
अहिले चलेको हल्ला सही हो भने पहिल्यै नै पौड्याल फिर्ता भैसक्नुपर्ने थियो । तर, अहिले आएर हठात् यस्तो निर्णय हुन गयो । त्यसो भए किन गलहत्याए त लिलामणि ?
खराब व्यापारीहरुले चलखेल गर्न थाले । यसमा मुख्य भूमिका वालुवाटरका एक जना भित्रिया र केही व्यापारीले खेलेको स्रोतले बताएको आजको जनआस्था साप्ताहिकमा खवर छ ।